Wadda Hadal Dhex Maray Djibouti Iyo Itoobiya Iyo Qodobo Xasaasi Ah Oo Ay Falanqayn Ku Sameeyeen.
(Hadhwanaagnews) Friday, December 07, 2018 15:44:13
Addis Ababab(HWN):Wasiirul dawlaha wasaarada arimaha dibada ee dalka Itoobiya Mss Hirut Zemene ayaa maanta kulan la yeeshay wasiirka arimaha dibada ee dalka Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf oo ay ku kulmeen magaalada Addis Ababa.
Wasiirka arimaha dibada ee dalka Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa sheegay inay dawlada Djibouti ay ka go’an tahay sii wadida xidhiidhka ay la leeyihiin dalka Itoobiya, halka wasiirul dawle Hirut Zemene ay rajo wanaagsan ka muujisay inay sii wadi doonaan xidhiidhka ay la leeyihiin dalka Djibouti.
Wasiirul dawle Zemene ayaa sidoo kale carabka ku adkaysay baahida loo qabo in la dheeli tiro xoojinta isdhex galka dhaqaale ee labada wadanba qorshaynayaan
si ay uga faa,iidaysaan dadyowga labada dal.
Wasiirka arimaha dibada ee dalka Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa sheegay in dawladooda ay sii wadayso taageerida iskaashiga ka dhaxeeya wadamada gobolka si ugu dambayn loo gaadho inuu guulaysto qorshaha isku dhafka ee Afrika.
Sidoo kale labada dhinac ayaa ka wada hadlay arimo ku saabsan kor u qaadista jidka tareen ee isku xidhaya Itoobiya iyo Djibouti, dhismaha dhuumaha shiidaalka ka soo qaadaya Itoobiya ee keenaya dekedaha Djibouti iyo Wadada isku xidhaysa Dikhil iyo Galafi oo la filayo inay dhamaato sanadka soo socda.